Hitman: Agent Jun (2020) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
၂၀၂၀ ရဲ့ ကိုရီယား အက်ရှင် အချစ် ဟာသ ကားလေး ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မင်းသားဟောင်းကြီး Sang-Woo Kwon ( The Divine Move2: The Wrathful, Love Again, Mystey Queen ) ထဲကမင်းသားနဲ့ ဟိုတလောက ဗိုလ်ကြီးကားထဲမှာ ဒိုဟေ ဂျီ အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Woo-seul-hye Hwang နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝိုင်ကီကီ ၁၂ မှ မင်းသားဂျွန်ကီ (ကင်ချားနာ ကင်ချားနာ ) Lee Yi Kyungတို့အပြင်နာမည်ကြီး မင်းသားကြီးတွေနဲ့ တင်ဆက်ထားတဲ့ ဟာသကားပဲပြောရမလား အက်ရှင်ကာပဲပြောရမလား ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ငယ်စဉ်အရွယ်ကတည်းက ကာတွန်းဆွဲတာကိုဝါသနာပါခဲ့သော်လည်း စပိုင်လုပ်နေရတဲ့ ဂျွန် တစ်ယောက်.. တစ်နေ့မှာ သူဟာ စပိုင်အလုပ်ကိုစိတ်ကုန်သွားကာ စပိုင်အလုပ်မှာ နှုတ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီး ကာတွန်းရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့… ၁၅ နှစ်အကြာမှာ သူဟာ မိန်းမနဲ့ ကလေးနဲ့ ရပြီးတော့ ဆင်းရဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ရင်း သူဝါသနာပါတဲ့ ကာတွန်းရေးဆရာဖြစ်အောင်လုပ်နေ… သူရဲ့ ကာတွန်းများမှာ အောင်မြင်မှုမရတော့ တစ်နေ့မှာ အရက်သောက်ပြီး သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းကို ကာတွန်းအဖြစ်ပြန်လည်အသက်သွင်းကာ.. အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ဖြန့်တင်မိသွား…… သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာ နိုင်ငံတော်လျို့ဝှက်ချက်တွေ စပိုင်လုပ်ငန်းအသေးစိတ်တွေပါနေတော့…. နိုင်ငံတော်က လျိုဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းရန် လိုက်လှန် ဖမ်းဆီးရာကနေ…….
အဲဒီအပြင် သူ့ရဲ့ ကာတွန်းစာအုပ်ထဲမှာ ပါနေတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားကြီးကပါ သူ့ကိုလိုက်ရှာပြီပေါ့……
ဇာတ်လမ်းလေးမှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ …..
Heo Dong-won Heo Sung-tae Hwangwoo Seul-hye Jo Woon Jun-ho Jeong Kwon Sang-woo Lee Ji-won Lee Joong-ok Lee Jun-hyeok Lee Yi-kyung
Option2sharer.pw 519 MB SD (480p)